Noocyada - Bisadaha Noti | Bisadaha Noti
Halkan waxaad ka heli doontaa mid liistada bisadaha oo dhan. Ogow asalka, dabeecada, sida ay ku timid, daryeelka ay u baahan tahay ... iyo inbadan, inbadan oo kusaabsan xayawaanka aad jeceshahay. Intaa waxaa dheer, waxay u adeegi doontaa hage si loo doorto midka ugu habboon baahiyaha iyo / ama caadooyinka qoyska. Waan kula socodsiin doonaa wixii ku saabsan taranka cusub ee soo muuqda si aadan hal uga maqnaan. Ku raaxayso.
by Monica Sanchez samee Sannadka 1 .
Bisadda Bengal ama Bengali waa dhogor la yaab leh. Muuqaalkeedu waa mid aad u xusuusanaya shabeelka; si kastaba ha noqotee, waa inaan ...
by Monica Sanchez samee 2 sano .
Highlander waa kubad qurux badan oo kalgacal leh oo dhogor ah oo awood u leh inay ku guuleysato qoyska oo dhan ...
Haddii aad jeceshahay bisadaha leh dhogor madow oo aad jeclaan lahayd inaad haysato mid leh dhogor ...
Bisadda Buluugga ah ee Ruushka
Bisadda buluuga ah ee Ruushka waa, oo ay weheliso reer Faaris, nooc aad u sharaf badan. Ulama jeedo kaliya ...
Haddii aad raadineyso gabar caan ah oo kalgacal leh oo kalgacal leh oo sidoo kale ka weyn Yurubta guud isla markaana u muuqata ...
Bisadda Neva Masquerade waa kalgacal leh muuqaal jilicsan oo macaan sida tan Siberia; ka yimid…
Bisadda Carab Mau waa nooc qurux badan oo dhogorta ka soo jeeda Carab in kastoo aysan weli ...
In kasta oo magacu kuguula muuqdo wax yaab leh, haddana hubaal haddii aad tahay qof jecel bisadaha waad arki lahayd ama maqli lahayd ...
Bisadda nooca Javanese waa xayawaan la yaab leh oo la qabsada dhib la'aan si ay ugu noolaadaan guri dabaq ah ...
Haddii aad ka mid tahay kuwa ku raaxeysta salaaxida bisad timo-duuban, LaPerm-ka ma caajisi doontid, ...
El Abtiiniyaan Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn ee bisadaha waxaana jira waxoogaa hubaal la'aan ah taariikhdeeda.
Xabashidu waxay u egtahay bisadaha ku jira Masar hore sida ka muuqata sawirro iyo farshaxanno. Magaca "Abyssinia" xiriir lama leh asalkiisa, laakiin waxaa loo tixgeliyaa xaqiiqda ah in Abyssinian-kii ugu horreeyay laga keenay Abyssinia.
Xusiddii ugu horreysay ee bisadda Abyssinia waxaa laga helay buug Ingiriis ah oo ay qortay Gordon Staples la daabacay 1874 oo ay la socdaan lithograph midab ah oo bisad Xabashi ah oo la galiyay Boqortooyada Midowday dhamaadka dagaalka.
Si kastaba ha noqotee, ma jiraan diiwaanno sheegaya in bisadaha laga soo dhoofiyay Reino UNIDO waxaana jira qaar maanta qaba fikirka ah in Xabashida lagu abuuray iskutallaabyo jinsiyado kala duwan oo Boqortooyada Midowday ah.
Laakiin waxaa jira daraasado ay sameeyeen khubarada hiddo-wadaha oo muujisay in xeebta Badweynta Hindiya iyo qaybo ka mid ah Koonfur-bari Aasiya ay yihiin meelaha ugu badan ee asal ahaan ay ka soo jeedo bisadda Abyssinia. Bisadan Xabashida ayaa waxaa laga soo dajiyay Woqooyiga Ameerika, waxaana laga keenay Boqortooyada Ingiriiska horaantii 1900 iyo sannadihii dambe 1930 Waxaa laga soo geliyay America oo laga keenay UK.
Xabashidu waa caqli badan, feejigan oo firfircoon, waa bisad jecel inay mashquul noqoto. Xabashidu waxay jeceshahay inay dadka la joogto, laakiin way ka madax bannaan tahay oo waxay isku dayi doontaa inay guriga ku xukunto.
Isagu waa nin xarrago leh oo leh muruq muruq.
Waxay leedahay indho waaweyn oo u eg yicib, laakiin dhagaha ayaa waxyar ka yar sidii caadiga ahayd.
Bisadda tabbab liinta